China Villa Design ụlọ ọrụ na-emepụta | Zhenyuan
Obodo:ọ bụ ezigbo ndọtị nke obibi ezinụlọ, ọ bụ nnọchiaha okomoko, elu-ọgwụgwụ, nkeonwe na akụnụba. Ọ bụ ebe obibi nke ogige a rụrụ na mpaghara ma ọ bụ ebe mara mma maka ntụrụndụ.
A na-aghota n'ozuzu ya, na mgbakwunye na ọrụ bụ isi nke "ibi", ọ bụ ụlọ obibi ndị okenye nke gosipụtara tumadi ndụ na njiri mara anụrị. N’echiche nke oge a, ọ bụ ụlọ obibi nke ụdị ubi nwere onwe ya, nke a na-ewu n’ime ụlọ ndị nwere onwe ha.
E kewara Villas n'ime ụdị ise ndị a: villas ndị nwere naanị otu ezinụlọ, ụlọ obibi, obodo nta abụọ, ụlọ ndị a na-eche nche, ụlọ elu ikuku.
* Otu ezinụlọ villa
Nke ahụ bụ, otu ogige nwere oghere nọrọ onwe ya n’elu na mpaghara ogige ubi dị n’ala ala bụ otu ụlọ ezumike nke onwe, nke egosiri dị ka oghere nọọrọ onwe ya n’akụkụ elu na nke ala. Lydị ụlọ obibi a bụ otu n'ime ihe ochie, nzuzo siri ike, ọnụ ahịa ahịa dị elu, bụkwa ụdị kachasị mma nke ụlọ obibi obodo.
* Obodo abuo
Ọ bụ ngwaahịa dị n'etiti ụlọ ụlọ na ụlọ ezumike, nke mejupụtara nkeji abụọ nke ụlọ ụlọ ahụ. Houselọ 2-PAC ndị ọzọ na-ewu ewu na United States bụ ụdị ụlọ nwere okpukpu abụọ. bawanye elu ụlọ ọkụ na-eme ka ọ nwee oghere n'èzí. bụ ìhè na nlele.
* Holọ obodo
O nwere ogige ya na ebe a na-adọba ụgbọala ya.O nwere mpaghara atọ ma ọ bụ karịa, nke jikọtara ọnụ site na ahịrị nke ala abụọ ruo anọ, ngalaba nke ọ bụla na-ekekọrịta mgbidi dị na mpụga, yana otu eserese eserese na ọnụ ụzọ dị iche. na ọtụtụ obodo villa.
* Fkpakọba villas
Ọ bụ ndọtị nke ụlọ ime obodo, n'etiti obodo na ụlọ ahụ, nwere ọtụtụ ụlọ obibi villa nke nwere ọtụtụ ụlọ a na-edochi elu site na ala ruo ala. N'ozuzu ala anọ ruo asaa, site na ngalaba ọ bụla nke abụọ ruo atọ nke ụlọ elu ahụ site n’elu ruo na ala, ma e jiri ya tụnyere ụlọ ụlọ, ụdị ịdị elu nke onwe nwere ike ịba ọgaranya, yana ruo n’ókè ụfọdụ iji merie adịghị ike nke ụlọ ụlọ dị warara ma dị omimi.
* Villa dị na mbara igwe
Sky villa bidoro na United States, nke a na-akpọ "ụlọ elu" ma ọ bụ "ụlọ elu igwe" na-ezo aka na ụlọ okomoko dị n'etiti etiti obodo ahụ, elu nke elu-elu. A na-aghọtakarị ya dịka nnukwu ebe obibi abụọ na-awụlikwa elu Ewubere n'elu ulo ma ọ bụ ụlọ dị elu n'ụdị obodo. Ngwaahịa ndị achọrọ dị n'usoro ihe ndị bụ isi nke mpaghara ala dum nke obodo ahụ, na ọnọdụ obodo dị mma, ọhụụ sara mbara, uzo na ihe ndị ọzọ.
Site n'ụdị ụlọ, mpụta obodo ahụ agbajiala mpaghara mpaghara na nke mba, ụdị ọmarịcha ụlọ obibi nke ụwa na ahịa ụlọ villa nke China fọrọ nke nta ka ọ pụta ìhè.
Akwụ ụgwọ nke obodo
N'ihu ihu nke obodo
Uzo di elu nke obodo
Nke gara aga: Klaasị usoro nhazi
Osote: Industrial osisi osisi Atiya
Uche Obodo nke Onwe
Ebumpụta ụlọ nke Villa
Ngwongwo ihe eji eme ihe eji eme ulo